ओलिभ डेनिस - Safal Stories
Home Motivational Biographies Science And Technology ओलिभ डेनिस
आफ्नो सपनालाई आफूले विश्वास गर, शंका गर्नेहरुले त तिम्रो हर पाइलामा शंका गर्छन्
ओलिभ डेनिस अमेरिकाको रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग एसोसिएसको सदस्य बन्ने पहिलो महिला हुन् । यसको साथै उनी कोर्नेल युनिभर्सिटीबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग पास गर्ने दोस्रो माहिला समेत हुन् । सिर्जनात्मक क्षमताको धनी सिभिल इन्जिनियर उनी २० नोभेम्बर १८८५ मा भएको थियो ।
ओलिभ वेजल डेनिस पेन्सिल्भानियामा जन्मेकी थिईन् र उनी सानो हुँदा नै परिवार बाल्टीमोरमा बसाइ सरेको थियो । बच्चा बेला देखि नै ओलिभ, सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग तर्फ आकर्षित थिईन् । आमा बुवाले ल्याइदिएको गुडियाको लागि घर बनाउने र भाइको लागि खेलकुदका सामग्री तथा गुडिया बनाउने काममा उनको विशेष रुचि थियो । वेस्टर्न हाइ स्कुलबाट ग्राजुएसन गरेकी ओलिभले सन् १९०८ मा गौचर कलेजबाट स्नातक गरेकी थिईन् । त्यसपछि गणितमा स्नातकोत्तर गर्न उनी कोलम्बिया युनिभर्सिटी गईन् ।
गणितमा स्नातकोत्तर सकेपछि ओलिभ डेनिस १० वर्षसम्म शिक्षण पेशामा लागिन् । गणित पढेर शिक्षिका बनेकी उनमा सिभिल इञ्जिनियरिङ्गप्रति माया थियो । त्यसैले दुई वटा समर क्लासमा फिजिक्स पढिन् र पछि सन् १९२० मा कर्नेल युनिभर्सिटीबाट इञ्जिनियरिङ्गको डिग्री पूरा गरिन् । पढाइ सकेर उनलाई काम पाउन निकै गाह्रो भयो । किनकी, महिलाले इञ्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यतिबेलाको मान्यता थियो।
जागिरको लागि हरतरहको प्रयासपछि सन् १९२० मा बि एण्ड ओ रेलरोडमा ड्राफ्टपर्सनको रुपमा ओलिभले जागिर पाइन् । त्यहाँ उनको काम पुलको डिजाइन गर्नु थियो । रेलरोडका प्रमुखले एकदिन रेलरोडको अवलोकन गरे । त्यसक्रममा उनले रेलमा धेरै यात्रुहरु महिला भएको देखे र यात्रु सेवामा महिला कर्मचारी हुनुपर्ने ठाने । त्यसैले गर्दा ओलिभ डेनिसलाई सन् १९२१ मा ‘सर्भिस इन्जिनियर’ को पदमा बढुवा गरियो । त्यो पदको सुरुवाती दिनमा उनी यात्रुहरुको सुविधाको बारेमा बुझ्न अत्यधिक रेल यात्रा गरिन् ।
रेलहरुको सिट देखि लिएर सबै भौतिक पक्ष तथा समय- तालिका र यात्रुहरुलाई दिईने सुविधालाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि ओलिभ रात-दिन खटिन् । उनले सबैभन्दा पहिले गरेको काम, यात्रुहरुको अनुकुलता अनुसार समय तालिका परिवर्तनले नै यात्रुहरुलाई धेरै सुविधा भएको थियो । उनलाई आफ्नो आराम भन्दा यात्रुहरुको आराम प्यारो हुन थाल्यो । ३० वर्षसम्म त्यहाँ काम गर्दा ओलिभले रेलमा भेन्टिलेटरको लागि डेनिस भेन्टिलेटरको आविष्कार गरिन्, जुन यात्रुहरु आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्थे । यात्रुहरुलाई रेल यात्रामा आकर्षित गर्न उनले ओभरहेड लाइट जस्तै थुपारी प्रविधिहरु रेलमा प्रयोग गरिन् । दोस्रो विश्व युद्धमा डिफेन्स ट्रान्सपोर्टेसनको कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गरेकी उनले सन् १९५१ मा कामबाट अवकाश लिएकी थिईन् ।
ओलिभ डेनिस, उनको समयको प्रभावशाली महिला इन्जिनियर मानिन्छिन् । उनले गरेका आविष्कारले रेल यातायातमा धेरै सुधार ल्यायो । अमेरिकन रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग एसोसिएसनकी पहिलो महिला सदस्य ओलिभ, सन् १९४० मा आफ्नो करियरमा प्रभावशाली अमेरिकाका १०० प्रभावशाली महिलामा समेत छानिएकी थिईन् । उनी ७१ वर्ष वर्षको उमेरमा सन् १९५७ , नोभेम्बर ५ मा संसारबाट बिदा भएकी थिइन् ।
आफ्नो सपनालाई तपाईं आफूले अंगाल्ने हो र विश्वास गर्ने हो । शंका गर्नेहरुले त तपाईंको हरेक पाइलामा शंका गर्छन् । लक्ष्य तपाईंको हो भने त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तपाईंलाई थाहा हुन्छ की, अरु कसैलाई ? तपाईंको मनको कुरा र तपाईंको भित्री विचार, तपाईंलाई थाहा हुन्छ वा अरु कसैलाई ? त्यसैले सुझाव लिनुहोस् , लिनु पनि पर्छ र मनन पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसलाई केलाएर, आफ्नो सपना, लक्ष्यलाई माया गर्दै आफ्नो बाटो तय गर्ने निर्णय आफूले गर्नुहोस् ।
Previousखतरनाक तर पत्ता लगाउन गाह्रो हुने ‘Smiling Depression’
Nextकविता : जित्न हिंडेको योद्धा
मारिया जोयपर्ट मायर